एउटा ट्वीट बापत ३ करोड कमाउँछन् रोनाल्डो - Ratopati
एउटा ट्वीट बापत ३ करोड कमाउँछन् रोनाल्डो
भदौ २० | (एजेन्सी)
काठमाडौं – क्रिष्टियानो रोनाल्डो ट्वीटरमा सबैभन्दा मूल्यवान् स्पोर्टस् स्टार घोषत भएका छन् । उनको प्रत्येक ट्वीटको मूल्य १ लाख ६९ हजार २ सय ८० पाउन्ड (२ करोड ७३ लाख नेपाली रुपैयाँ) बराबर रहेको बताइएको छ । ट्वीटर मा उनका ३७ दशमलव ७ मिलियन फलोअर्स छन् । उनकोे ट्वीटरलाई कहिले पोर्चुगिज टेलरिंग कम्पनी तथा कहिले अन्य कम्पनीले विज्ञापन गर्ने माध्यम समेत बनाउने गरेका छन् ।
रोनाल्डोले भर्खरै मात्र नाइकको एक उत्पादनको ट्वीट गरेबापत १ लाख ६९ हजार २ सय ८० पाउन्ड लिएको बताइएको छ । विज्ञापनको मामिलामा रोनाल्डोपछि एनबिए स्टार लिब्रोन जेम्स दोस्रो स्थानमा छन् । उनको प्रति ट्वीटको मूल्य झन्डै ९२ हजार ३ सय २३ पर्न जान्छ । यस सूचिमा ब्राजिली कप्तान नेइमार तेस्रो नम्बरमा छन् ।
I love my new #techpack from @nikesportswear. It’s amazing! pic.twitter.com/dzwIo9TjNl
उनको प्रति ट्वीटको मूल्य ७२ हजार ३ सय २० पर्न जान्छ । ट्वीटरमा नेइमारका १९ दशमलव ७ मिलियन फलोअर्स छन् । त्यस्तै यस सुचिमा वायनी रुनी चौथो स्थानमा छन् । फुटबलरहरुको दबादबा रहेको सुचिमा बास्केटबलका केभिन डुरेन्ट पाँचौ स्थानमा छन् । त्यस्तै, आर्सनलका जर्मन स्टार मेसुट ओजिल छैटौ, कोलम्बियाली स्टार राडामेल फाल्काओ सातौँ र अर्जेन्टिनी स्टार सर्जियो अग्वुइरो आठौँ स्थानमा छन् ।
टेनिसका एक्ला प्रतिनिधि राफाल नाडाल यस सूचिको नवौँ स्थानमा छन् । कोलम्बियाकै स्टार फुटबलर जेम्स रोडिग्वेज दशौँ स्थानमा छन् । रोचक कुरा यस सूचिमा ब्रम्हाण्डकै उत्कृष्ट फुटबलर लियोनल मेसीको नाम छ्रैन् ।